Xiliga Rasmiga Ah Ee Horyaalka Serie A La Bilaabi Doono Ayaa Dowlada Taliyaanigu War Ka Soo Saartay? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Dawlada Talyaaniga ayaa dabcisay go’doonkii ay dadkeedu ku soo jireen bilihii la soo dhaafay waxaana la soo saaray qorshaha ay kooxaha horyaalka Serie A shaqada dib ugu soo laabanayaan.
Wajiga laabad ee taxadarka coronavirus ee dawlada Talyaaniga ayaa lagu xaqiijiyay in June 1 ay noqon doonto waqtiga ay dad wayni si gaabis ah ugu soo laaban doonaan noloshii caadiga ahayd laakiin todobaadka soo socda waxay kooxaha Serie A bilaabanayaan tababarkii ay ku diyaar garoobayeen.
War hadda soo baxay ayaa lagu xaqiijiyay in May 4 ay kooxaha Serie A bilaban doonaan tababarka laakiin waxaa waajib ku noqon doonta in ay raacaan tilmaamaha caafimaad kala fogaanshaha bulsho si taxadarka loo sii wado.
Marka ay kooxaha Serie A tababarka ka ku soo laabtaan May 4 waxay kadib tababarka buuxa qaadan doonaan May 18 markaas oo ay raaci doonaan qorshe qabye ah oo ay dawlada Talyaanigu soo saartay.
In May 4 ay ciyaartoyda kooxaha Serie A dib u bilaaban doonaan tababarka isla markaana ay kooxuhu tababarka buuxa samayn doonaan May 18 waxay soo dadajinaysaa in xili ciyaareedka dib loo bilaabo.
Ra’isal wasaaraha Talyaaniga ee Giuseppe Conte ayaa yidhi: “Waxaanu qiimayn doonaa haddii ay jiraan xaalado ogolaanaya in xil ciyaareedka la dhamaystiro. Haddii aanu heerkaas gaadhno, waanu dhamaystiri doonaa ee amaanka iyo badqabka ugu sareeya. Samir ayaanu u leenahay Sportska mana doonayno in cida aanu ku daynaynaa ay xanuunsadaan”.
Qorshaha ayaa ah in xili ciyaareedka Serie A lagu dhamaystiri karo inta u dhexaysa May 27 ilaa June 2 kaas oo markii horeba ahaa qorshe la sii dajiyay.
Dhakhtaariirta caafimaadka ayaa hore u shaaciyay in haddii garoomo madhan lagu ciyaaro ayna halis badan keenayn in xili ciyaareedka la dhamaystiro iyaga oo ku dooday in kubbada cagtu ay tahay mid aan jidhka ciyaartoydu si joogto ah isku gaadhin.
Qorshaha wajiga labaad ee Covid-19 ee ay dawlada Talyaanigu soo saartay waxaa ku jira in tababarka lagu bilaabo si kali kali ah oo ciyaartoydu ay kala fogaadaan iyada oo marka ay xaaladu soo hagaagto dib loo bilaabi doono kulamada baaqiga ah.
Markii hore horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa ahaa kan shaaciyay in ay May 9 kooxuhu tababarka ku soo laabanayaan balse hadda Italy ayaa May 4 dib u bilaaban doona tababarka diyaar garowga kulamada baaqiga ah.
Sidoo kale waxaa la filayaa in xiliyada soo socda ay kooxaha Premier League iyo horyaalka La liga ay dhinacooda ka shaacin doonaan jadwalka soo laabashada xili ciyaareedka go’doonka ugu jiray Coronavirus.